Waxbarashadu waa lama huraan, gaar ahaan saliida hemp iyo CBD ee xayawaanka rabaayadda ah. • Dawooyinka Inc.eu
Waxbarista milkiileyaasha xayawaanka ee nidaamka endocannabinoid iyo faa'iidooyinkiisa ayaa muhiim u ah keenista suuqyada waxyaabaha nafaqada leh ee saliidda hemp cusub, ayuu yiri Gil Laureiro, oo ah agaasimaha guud iyo aasaasaha shirkadda SilverLeaf Global.
1 Sidee u shaqeeyaa endocannabinoid xayawaanku?
2 Sidee xayawaanka endocannabinoid uga duwan yahay aadanaha? Oo sidee isugu mid yihiin?
3 Dadku badanaa ma oga haddii ay u isticmaalaan saliid hemp buuxa ama muuqaal ballaaran. Arintaan xayawaanka ma ku dhacdaa?
4 Waxaan ogsoonahay in qaadashada ay mararka qaar noqon karto arrin bini'aadamka. Ka waran qiyaasta saliida hemp ee xayawaanka?
5 Dawladuhu ma ku talinayaan saliida hemp ee xayawaanka rabbaayadaysan
Tacliintu waa tillaabada ugu muhiimsan ee samaynta alaabada ku fadhida hemp ay heli karaan macaamiisha.
Ka agaasime guud ahaan iyo aasaasaha shirkadda 'SilverLeaf Global', xirfadda Gil Laureiro waxay si qoto dheer ugu qotontaa aqoonsashada alaabooyinka casriga ah. Shaqadiisu sidoo kale waxay xaqiijineysaa inay dhammaantood yihiin kuwo sharciyeysan oo wax ku ool ah ka hor inta aan suuqa loo soo bandhigin sheyga. Laureiro wuxuu si toos ah ugu lug lahaa hagida alaabooyin badan iyada oo loo marayo nidaamka oggolaanshaha FDA ee Ameerika.
U doodaha weyn ee sayniska, faa'iidooyinka caafimaad ee cilmi-baarista, Laureiro naftiisu waxay ku quusatay xallinta hemp-based.
“Waxa aan dad badani ogayn ayaa ah in nidaamka endocannabinoid ee naasleyda oo dhan - vertebrates iyo invertebrates - ay isku si u shaqeeyaan,” ayuu yiri Laureiro.
“Hadafku waa inaan horumarino nafteena iyo asxaabteena dhogorta leh ee aaminka ah iyo alaab la hubin karo oo kicin kara unugyadeena si habsami leh u shaqeynaya, oo sidoo kale loo yaqaan 'optimization cell', ayuu yiri Laureiro. “Waxaan ku guuleysaneynaa isku hagaajinta unugyada iyada oo loo marayo kaabista unugyada isla markaana aan yareyno khalkhalka unugyada. Si kale haddii loo dhigo, alaabooyinka waa in loogu talagalay in lagu hagaajiyo waxqabadka gacanta sababo la xiriira cilladaha endocannabinoids in la yareeyo. ”
Inkastoo wax badan CBDsoosaarayaasha leh khadadka alaabada xayawaannada, Laureiro iyo la-hawlgalayaasheeda ayaa bilaabay qadka wax soo saarkooda bilowgooda si ay u qaabeeyaan oo ay u qaabeeyaan alaabada ku saleysan hemp ee loogu talagalay in kor loogu qaado caafimaadka iyo qaab nololeedka ka wanaagsan saaxiibada afarta lugood leh.
Gil Laureiro: Aniga iyo aasaasayaashaydu waxaan sanado badan qaadanay horumarinta xalalka daryeelka caafimaadka ee wax ka qabta suuqa caafimaadka aadanaha iyo xayawaanka labadaba. Waxaan ballaarinay istiraatiijiyaddeena ganacsiga si aan ugu isticmaalno alaabada ku saleysan hemp-ka awooddooda ah inay noqdaan kuwo aan duullaan ahayn oo si weyn gacan uga geysta hagaajinta gacanta. Hindisaheena wax soo saarka hemp waxaa si toos ah saameyn ugu leh khibradeena horumarinta ganacsiga iyo qibradeena ku jirta qalabka caafimaadka ee soo nooleynta unugyada aan duuliyaha laheyn ee ay soo bandhigtay FDA.
Labada qalab caafimaad ee unugyada aan faafin ee soo-kabashada iyo alaabooyinka hemp-ku-saleysan labaduba waxay wadaagaan isku ekaansho maaddaama ay bixiyaan xalal baaritaan iyo daaweyn ah oo loogu talagalay caafimaadka xoolaha, dawooyinka dadka iyo suuqyada wax ka qabashada caafimaadka si isku mid ah. Sida aadanaha oo kale, sida cilmiyan loo xaqiijiyay, xayawaanku waxay ka kooban yihiin nidaam endocannabinoid ah waxayna muujiyaan astaamo isku mid ah marka nidaamka endocannabinoid uu yaraado.
Sidee u shaqeeyaa endocannabinoid xayawaanku?
Bini-aadamka iyo xayawaankuba waxay leeyihiin nidaam endocannabinoid (ECS) oo ka kooban soo-dhoweeyeyaasha cannabinoid, maaddooyinka loo yaqaan endocannabinoid iyo enzymes-kooda dheef-shiid kiimikaadka ah. Si wada jir ah ayey u sameystaan ​​nidaam molikal muhiim ah oo jirku u adeegsado inuu ku ilaaliyo homeostasis.
Nidaamka 'endocannabinoid' waxaa loo aqoonsan yahay inuu yahay nidaam wax-ka-beddel muhiim ah oo si toos ah u saameeya shaqada maskaxda, unugyada unugyada difaaca jirka. Cannabidiolsaliida hemp waxay ku shaqeysaa iyada oo loo maro Cannabinoid qabtayaasha ku yaala unugyada jirka xayawaankiisa oo dhan, kaasoo wax ka qabta cilladaha nidaamka endocannabinoid.
Cannabinoids waxay saameyn ku yeelataa jirka xayawaanka maxaa yeelay waxay ka kooban yihiin qabtayaal loo sameeyay inay ku xirnaadaan maaddooyinka loo yaqaan 'cannabinoid' gaar ah.
Sidee xayawaanka endocannabinoid uga duwan yahay aadanaha? Oo sidee isugu mid yihiin?
Nidaamka endocannabinoid ee aadanaha iyo xayawaanku aad ayey isugu egyihiin marka loo eego shaqada loogu talagalay iyo astaamaha lagu arkay yaraanta. Faa'iidooyinka caafimaad ee dheeraadka ah ee loo yaqaan 'Hemp oil' ee loo barbardhigo xayawaanka isla markaana aad ugu eg aadanaha.
Dadku badanaa ma oga haddii ay u isticmaalaan saliid hemp buuxa ama muuqaal ballaaran. Arintaan xayawaanka ma ku dhacdaa?
Saliidaha hemp buuxa ee 'Spectrum hemp', qeexitaan ahaan, waxaa ku jira qadar yar THC iyo hemp-ka laga shaqeynayo, THC xaadir ah lama sifeeyo. Sifeer Sreedrum wuxuu socodsiiyaa talaabo dheeri ah si loo hubiyo in THC laga saaray sidaas darteedna raad ku hayn THC lama ogaan karo inta lagu jiro baarista. Sayniska waxay noo sheegaysaa in dhammaan qaddarka raadinta ee loo yaqaan 'THC ingested' ay wada yihiin oo ay waxyeello geysan karaan, waana sababtaas tan keentay in xayawaannada guryuhu ay isticmaalaan oo keliya saliida hemp ballaaran.
Si loo hubiyo inaad iibsato badeecad lagu arki karo ee THC lama ogaan karo, sheyga waa inuu la socdaa Shahaadada Falanqaynta (COA) iyo COA waa inay ku siisaa shaybaar tijaabo madax banaan oo la xaqiijin karo.
Waxaan ogsoonahay in qaadashada ay mararka qaar noqon karto arrin bini'aadamka. Ka waran qiyaasta saliida hemp ee xayawaanka?
Qiyaasta xayawaanka la rabaa waxaa lagu xisaabiyaa miisaanka oo qiyaasta waa in si cad loogu qoro sumadda sheyga. Si ka duwan aadanaha, kormeerka xayawaankaaga inta lagu jiro toddobaadyada ugu horreeya ee qaadashada waxay muhiim u tahay go'aaminta haddii xaddiga la dalbaday uu shaqeynayo, ama in qiyaasta la kordhiyo ama waxyar hoos loo dhigo.
Dawladuhu ma ku talinayaan saliida hemp ee xayawaanka rabbaayadaysan
Talooyinka ku saabsan saliida hemp ee dhakhaatiirta xoolaha waxay si weyn ugu kala duwan yihiin waddanka. Markay taas dhaheen, waxaa jira tiro badan oo dhaqamada kaladuwan oo aan ku talinaynin oo keliya saliida hemp ee xayawaanka, laakiin sidoo kale ku soo bandhiga wax soosaarkooda. Daraasado badan ayaa la sameeyaa sababta oo ah cadaymaha ciriiriga ah ee durba la helay in helitaanka saliida hemp ay lahaan karaan dhowr faa iidooyin caafimaad xoolaha. Kuwa ugu caansan waa yareynta bararka iyo yareynta xanuunka.
Markii ay sii kordhayaan daraasadahaan la soo bandhigo ama la daabaco, inbadan oo ka mid ah jaaliyadaha ayaa kugula talin kara kaabida hemp.
Sources ao Naternal (EN), TheGreenEnt ganacsur (EN)
Americaxayawaankawaxbarashadacaafimaad lehcaafimaadkaxagashacilmi baarisTHCMaraykanka
6 bogsiiyaa dhirta si ay uga caawiso maareynta walaaca iyo walaaca
Dhibaatooyinka cilmu-nafsiga waxay noqon karaan kuwo niyad-jab ku ah la-tacaalidda iyo dhibaatooyinka maskaxda. Adiga ...
La ogaadey 40 sano ka hor: Muxuu sameeyaa cannabinoid CBDV (Cannabidivarin)?
Cannabidivarin, oo loo yaqaan 'CBDV', waa mid ka mid ah xeryahooda dhowaan uun la baaray ...